Daawo:Wararkii Ugu Dambeeyay Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo Musharaxiin Madaxweyne oo..
Wednesday January 11, 2017 - 07:58:47 in Wararka
Waxaa saacadaha soo socda lagu wadaa in magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta golaha shacabka ay ka dhacdo Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ay isku soo sharaxeyn Afar Musharax.
Waxaa saacadaha soo socda lagu wadaa in magaalada Muqdisho gaar ahaan xarunta golaha shacabka ay ka dhacdo Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya ay isku soo sharaxeyn Afar Musharax. Doorashada ayaa ah mid xiiso gaar ah leh, waxaana Musharaxiinta xilka Gudoomiyaha Baarlamaanka u tartamaya kala taageersan qaar kamid ah Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya.
Waxaa xilkan ugu cad cad midkoodna laga yabaa in uu kusoo baxo Xildhibaan Maxamed Cusmaan Jawaari iyo Xildhibaan C/Rashiid Maxamed Xidig, labadana Musharax ayaana la saadaalinaya in wareega ugu dambeeya isugu soo hari doonaan midkoodna laga yaabo in uu guuleesto.
Doorashada ayaa ah mid adag oon la saadaalin karin cida kusoo baxeysa, Musharaxiinta ayaana saacadihii ugu dambeeyay waday olole xoogan ay ku doonayaan sidii ay ugu guuleesan lahaayeen Kursigan.
Amaanka xarunta doorashada ka dhaceysa iyo wadooyinka soo gala ayaa si weyn loo adkeeyay, waxaana la xiray Wadooyin muhiim ah oo kuyaala magaalada Muqdisho si looga hortago in la carqaladeeyo inta doorashada ay socoto.
Jaamacadaha iyo iskuulada kuyaala magaalada Muqdisho ayaa maanta intooda badan la fasaxay, waxaana shacabka magaalada Muqdisho ay si weyn uga dhursugayaan doorashada Gudoonka Baarlamaanka iyo natiijada kasoo baxda.
Doorashada Gudoomiyaha Baarlamaanka ayaa kala saari doonta Musharaxiinta u taagan xilka Madaxweynaha Soomaaliya Qaarkood, waxaana kursiga Gudoomiyaha Baarlamaanka hadii uu kusoo baxo Xildhibaan Xidig meesha ka bixi doono Mudsharaxiin saameyn badan leh oo kasoo jeeda Beesha Daarood ay ku jiraan Farmaajo iyo Cumar Cabdirashiid.
Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa isna damaciisa ku aadan in dalka Madaxweyne ka noqdo dib u liqi doona hadii kursiga Gudoomiyaha Baarlamaanka loo doorto nin kasoo jeeda Beesha Digil iyo Mirifle, waxa uuna shariif sameeyay dadaalo badan si uu kursigaasi beeshiisa uga weeciyo.
Saacadaha soo socda ayaa wax badan ay isbadali doonaan, waxaana tartankan loogu jiro kursiga Gudoomiyaha Baarlamaanka iyo kuxigeenadiisa horudhac u yahay doorashada adag ee Madaxweynaha Soomaaliya.